eNasha.com - कागबेनीः हेर्न किन जरुरी छ ?
नेपाली चलचित्र जसरी बनिरहेको छ, त्यो रातारात परिवर्तन हुँदैन । बरु क्रान्ति चाहिँ रातारात हुनसक्छ । क्रान्ति हुन पनि निरन्तरको प्रयासपछि मात्र सम्भव भएको हुन्छ । त्यसैले नेपाली सिनेमामा जो कसैले पनि यदि परिवर्तन चाहन्छ भने त्योभन्दा अघि गरिने केही प्रयोगात्मक परीक्षणबाट गुज्रिनु जरुरी हुन्छ । जसरी नेपालमा राजतन्त्र र प्रजातन्त्रबीचको सङ्क्रमणकाल रह्यो, त्यस्तै खराब सिनेमा र राम्रा सिनेमा बन्ने कालमा सङ्क्रमणकालीन चलचित्र बन्ने क्रममा छन् । त्योमध्ये कागबेनी पहिलो हो । जसले नेपालका केही पुरातन मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । उसले पुरातन मान्यताका रिललाई अहिले प्रयोग नगर्ने भएको छ । त्यसैले कागबेनीलाई सङ्क्रमणकालीन प्रयोगात्मक चलचित्र भन्दा हुन्छ ।
यसले पहिलो दृश्यदेखि अन्तिमसम्म नै गीत राखेको छैन । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा यो पहिलो प्रयोग मान्नु पर्छ । गीत नभए पनि दर्शकहरुले सोध्ने छैनन्, किन गीत नराखेको भनेर । किनभने ठुँसेका गीत हेर्नुभन्दा नहेर्नै जाति भन्ने दर्शकहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेका छन् ।
त्यसो त यो सिनेमालाई 'थ्रीलर' मान्ने पनि होलान्, तर यो त्यो वर्गको सिनेमा चाहिँ होइन । किनभने 'थ्रीलर' शुरुदेखि अन्तिमसम्मै उत्सुकता जगाइरहनु पर्छ । यो मामिलामा कागबेनी भाग्यमानी छैन । र, जहाँसम्म मलाई लाग्छ- यो मान्छेको लोभको कथा हो । यो आदम र इभको लोभको कथा हो, जुन लोभ साश्वत सत्य पनि हो ।
केही व्यक्तिले मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोधे- किनभने यो चलचित्रका लेखकहरुमध्ये एउटा म पनि हुँ । उनीहरुको सोधाइ बीचबीचमा आउने एउटी बौलाही केटी किन राखिएको ? चलचित्रमा एक पटक मात्र देखिने भारतीय साधु किन ? किन त्यहीँको स्थानीय चिजबिज प्रयोग भएन ? केही भावप्रधान र 'थ्रील जगाउने' दृश्याङ्शहरुको कमजोर ट्रिटमेन्टका बारेमा तपाइँ के भन्नुहुन्छ ? यसमा चाहिँ मेरा केही आफ्ना तर्क छन् । जस्तो कि बौलाहीको उपस्थिति संसारका केही अमूक रहस्यको प्रतिनिधित्वका लागि राखिएको हो । हामीले जतिसुकै अस्वीकार गरौँ, भूतप्रेत वा शक्तिजस्ता यस्ता केही तत्व यस संसारमा विद्यमान छन्, जसको अहिलेसम्म कुनै वैज्ञानिक आधार फेला परेका त छैनन् तर जुनसुकै अवस्थामा उपस्थिति रहे पनि त्यसको अस्तित्व चाहिँ छ नै । चलचित्रको बौलाही जब जब कुनै 'इच्छा' माग्न खोजिन्छ र त्यो पूरा हुने अवस्थामा हुन्छ- उसलाई छटपटाहट हुन्छ ।
चलचित्रमा प्रयुक्त साधु जुन भारतीय छ, उसलाई किन प्रयोग गरिएको भन्ने प्रश्नको उपयुक्त उत्तर चाहिँ के हुन सक्छ भने मुक्तिनाथ मन्दिर आउजाउ गर्ने हज्जारौँ साधुहरु कागबेनीमा बास बस्न सक्छन् । त्यहाँ भ्रमणरत साधुहरुका अनेकन् रहस्यात्मक कथाहरु छन् । मूलतः योगीहरु (जोगीहरु होइनन्) सँग यस्ता केही शक्ति पनि हुन्छन्, जुन साधारण मान्छेले कल्पेका पनि हुँदैनन् । केही योगीका आत्मकथा पढेपछि मलाई यो विश्वास पलाएको पनि छ । र, हामीले जब कागबेनी, मार्फा, जोमसोम, स्याङतिर 'बाँदरको पञ्जा'सँग लगभग मिल्दोजुल्दो कुनै तथ्य र लोकोक्ति छन् कि भनेर नखोजेका पनि होइनौँ । तर जबरजस्ती त्यहाँका गुम्बाका कथासँग यो लोभको कथा जोड्दा स्थानीय भावनालाई त कहीँ असर गर्दैन भन्ने प्रश्नले हामीलाई झक्झक्यायो ।
केही साथीहरुले मलाई भने- कागबेनी बीचबीचमा बोझिल छ । तर यसमा मेरो भनाइ के छ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा जसरी कुनै दिन टेन्सनको हुन्छ, कुनै दिन खुशीको, कुनै चाहिँ बोरिङ । दैनिक जीवन चलाउँदै गर्दा रमेश र उसको परिवारको दैनिकी एकरसतापूर्ण छ । यो बोझिलपना त्यतिबेला आएको छ, जब उनीहरुको बिहे भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । १० वर्षे कालखण्डमा एकरसता जीवन व्यतीत गरेको घर-परिवारको दैनिकी बोझिल त त्यसै पनि हुन्छ । त्यो एकरसता देखाउँदा उनीहरुको जीवनशैली जति अल्छिलाग्दो र एकरसता देखिन्छ, सिनेमामा पनि त्यस्तै प्रभाव सिर्जना हुने हुँदा सिनेमा बीचबीचमा बोझिल लागेको हो । के तपाइँको जीवन जुन बेला पनि एक्साइटिङ हुन्छ भन्ने कल्पन सक्नु हुन्छ ? सिनेमा ज्यादा नाटकीय नहोस्, बढी बलिउडिया नदेखियोस् भन्ने सचेतनाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । र, खासगरी यहाँ थप्नै पर्छ- फिल्म बढी बलिउडिया नहोस् भन्ने कुरामा निर्माता भाष्कर ढुङ्गाना बढी नै सचेत थिए ।
यसको अर्थ यो होइन, जसरी क्वेष्ट इन्टरटेन्मेन्टले क्यामेराको प्रोटोटाइप ल्याएर त्यसको सफलतापूर्वक परीक्षण गर्‍यो, त्यस्तै कागबेनी एउटा सफलताको प्रोटोटाइप हो । एउटा लेखकभन्दा पनि एउटा दर्शकका हिसाबले मैले जब प्रिमियर शोमा चलचित्र हेरेँ- केही मुख्य दृश्यले जमाउनसक्ने प्रभाव कमजोर पो भएको हो कि ! भन्ने महसूस भयो । जस्तो रमेशले कृष्णको गोजीबाट जब 'पञ्जा' निकाल्छ, त्यो निकालेको दृश्य जति प्रभावी हुनुपर्ने थियो, जति कौतुकमय बन्नु पर्ने थियो- त्यो हुन सकेन । कतिपय दृश्यका 'इमोशन' बीचबीचमा गायब छन् । अर्थात् कलाकारको इमोशनसँग दर्शक एकाकार हुनै नपाई दृश्य कटिसक्छ । तर छोरो मरिसकेपछि रमेश र ताराको रिक्ततालाई चाहिँ सिनेमाले राम्रोसँग देखाएको छ । यसमा प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।
अनि अर्को कुरा चाहीँ सिनेमाको नाम कागबेनी, तर पूरै सिनेमा हेरिसक्दा यो ठाउँको नाम हो कि वा अरु नै केही त्यो दर्शकले चाल पाउँदैनन् । रमेश कहाँ बस्छ ? रमेश र उसको साथी हिँडिरहँदा कुन कुन ठाउँ हुँदै गइरहेका होलान् ? आदि कुरा प्रश्न नै रहन्छन्, तिनको उत्तर मैले पनि पाउन सकिनँ ।
सबैभन्दा प्रशंसापूर्ण काम त कलाकारले गरेका छन् । निमा रुम्बाले गायक भइकन पनि अभिनयमा जुन सम्भावना देखाएका छन्, त्यो साँच्चिकै प्रशंसायोग्य छ । रेटिङ गर्ने हो भने म त सौगात मल्ल र दिया मास्केभन्दा माथि निमालाई रेटिङ गर्छु । उनको मध्यान्तरअघि र पछिको दृश्यमा अभिनयको भिन्नता जसरी देखाएका छन्, त्यसका लागि निर्देशकले जसरी काम लिएका छन्- प्रशंसा नगरिरहन सकिन्न । बौलाही बनेकी आशा मगराती, भट्टीवाल्नी पूजा गुरुङहरुले ठीकै काम गरेका छन् । छोटो भूमिका भए पनि साहुजी बनेका पुष्कर गुरुङको कन्याउने बानीले दर्शकलाई कुत्कुत्याउँछ ।
यो आम नेपाली चलचित्रभन्दा माथि छ, त्यो 'माथि' हुनुको असर के हुनसक्छ भने यसका दर्शक सीमित हुन सक्छन् । तर फरक स्वादको अपेक्षा लिएर आउने दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउन चाहिँ सक्छ ।
यहाँ एउटा सन्दर्भ कोट्याउन जरुरी छ । एक साथीले सिनेमा हेरिसकेपछि भने- "नेपाली सिनेमा 'हेर्नैपर्ने सूचि'मा पर्न अझै केही वर्ष लाग्छ । तर सिनेमा नहेरिकन एकै चोटी त्यो दिनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । तुलनात्मक राम्रा नेपाली सिनेमा हेर्ने बानी बसाल्यो भने नेपाली सिनेमा हेर्नैपर्ने दिन आउन समय कुर्नु पर्दैन ।" यो चाहिँ तुलनात्मक रुपमा राम्रो सिनेमा बनेको छ । त्यसैले यो सिनेमा हेर्न जरुरी छ ।